Talata 08 Jiona 2021 – FJKM
Talata 08 Jiona 2021
Paoly : Zanak’Andriamanitra mpampihavana
Fampihavanana an’i Filemona sy Onesimosy no votoatin’ny hafatra ao amin’ny Epistily ho an’ i Filemona. Hita amin’ny asa sorany ho an’i Filemona ny maha- mpanompon’Andriamanitra an’i Paoly, eny ny maha- zanak’Andriamanitra azy . Ny zanak’Andriamanitra dia:
1- Mitory filazantsara ho enti-manova ny hafa
Noho ny Filazantsara izay notorian’i Paoly tamin’ny Onesimosy dia tonga niova fo izy. Tsy nahasoa an’i Filemona izy tany aloha, fa noho ny Filazantsara izay notoriana taminy dia tonga rahalahy malala izy. Tonga mahasoa izy araka ny anarany. Anisan’izay nafana fo tamin’ny fanompoana an’i Paoly izay, tena nikarakara an’i Paoly. Hita avy amin’izao fa tena manova olona tokoa ny Filazantsara rehefa tena toriana sy ambara.
2- Manolo-tena handoa ny trosan’ny hafa
Mba hahatanteraka araka ny tokony ho izy ny fampihavanana azy mirahalahy dia noraisin’i Paoly ho trosany ny an’i Onesimosy. Nanahaka an’i Jesoa Paoly teto. Nandray ny trosan’ny olona rehetra , ka nandoa izany tamin’ny alalan’ny Rany teo amin’ny hazo fijaliana. Mampianatra antsika Paoly fa azo atao ny manome izay azo omena ho enti-mahatanteraka, araka izay tokony ho izy ny fihavanana. Tsy voatery miandry izay tsy ho tonga isika, fa izay misy eo am-pelatànana dia azo atolotra hahatanteraka ny fampihavanana marina. Misy ezaka manokana takiana amin’izay vonona hampihavana ny hafa. Misy ezaka manokana takiana amin’izay vonona hampihavana ny olona rehetra ihany koa amin’Andriamanitra. Ianarana amin’i Jesoa kristy izany, Izy mantsy no nanome be indrindra. Izy no nanome ny sarobidy indrindra. Soa fianatra tamin’i Jesoa io.
Inona avy no azon’ny olona hatolotra hahatanteraka ny fampihavanana marina?
Vokarin’ny Sampana Sekoly Alahady Foibe